မြင်သူတကာ စိတ်နှစ်လုံးရွှင်ပြုံးသွားစေမယ့် စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ရဲ့ မိသားစုပုံရိပ်များ – Cele Top Stars
December 1, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်စန္ဒီမြင့်လွင် ကတော့ချစ်စရာသမီးလေးကို မွေးဖွားထားကာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သီချင်းအမျိုးစားများစွာနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို ဝင်ရောက်ထား နိုင်တဲ့ သူမကတော့ သီချင်းအသစ်လေးတွေကို အမြဲကြိုးစား ဖန်တီးနေတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ပရိသတ်တွေအားကျချစ်ခင်နေရတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ Treasure လေးကလည်း တစ်နေ့တစ်ခြားမေမေနဲ့ ပိုပိုတူလာပြီး ၀၀ကစ်ကစ်လေးနဲ့အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတာလည်းဖြစ် ပါတယ်… ။
မိသားစု ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း အမြဲလိုလို ဖော်ပြပေးလေ့ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ။ အခုလည်း မြင်သူတိုင်း ကြည်နူး အားကျသွားရလောက်အောင် ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မိသားစု ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို အမှတ်တရ ဖော်ပြလာပါတယ် ။ ပုံတိုင်းက ချစ်စရာကောင်းလွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်…. ။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျောစန်ဒီမွငျ့လှငျ ကတော့ခဈြစရာသမီးလေးကို မှေးဖှားထားကာ ပြျောရှငျခမျြးမွတေဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။သီခငျြးအမြိုးစားမြားစှာနဲ့ ဆယျကြျောသကျလူငယျတှရေဲ့ ရငျထဲကို ဝငျရောကျထား နိုငျတဲ့ သူမကတော့ သီခငျြးအသဈလေးတှကေို အမွဲကွိုးစား ဖနျတီးနတေဲ့ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ…။
ပရိသတျတှအေားကခြဈြခငျနရေတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီးခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားကာ Treasure လေးကလညျး တဈနတေ့ဈခွားမမေနေဲ့ ပိုပိုတူလာပွီး ဝဝကဈကဈလေးနဲ့အရမျးခဈြဖို့ကောငျးနတောလညျးဖွဈ ပါတယျ… ။
မိသားစု ပုံရိပျလေးတှကေိုလညျး အမွဲလိုလို ဖျောပွပေးလရှေိ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ ။ အခုလညျး မွငျသူတိုငျး ကွညျနူး အားကသြှားရလောကျအောငျ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ မိသားစု ပြျောရှငျနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို အမှတျတရ ဖျောပွလာပါတယျ ။ ပုံတိုငျးက ခဈြစရာကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ…. ။